ဘူမိဗေဒလေ့လာရန်။ မှတ်စုများ၊ သိလိုစိတ်များနှင့်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်များ။ ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
ဒီအမျိုးအစားမှာအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးအကြောင်းပြောမယ် ကမ္ဘာမြေ၏ပထဝီဝင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာမြေ၏အတွင်းပိုင်းအလွှာနှင့်အပြင်ဘက်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောကွဲပြားခြားနားသောဘူမိဗေဒဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များကိုလေ့လာပါမည်။ ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်သည်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာမည့်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာအေးဂျင့်များ၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ ထို့အပြင်သင်တည်ရှိနေသောကျောက်အမျိုးအစားများ၊ ၎င်းတို့မည်သို့ဖွဲ့စည်းသည်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းတို့ကိုသင်သိရှိနိုင်လိမ့်မည်။
အကယ်စင်စစ်သင်သည်တက္ကသိုလ် / တက္ကသိုလ်မှသင်၏မှတ်စုများကိုမှီဝဲခြင်းနှင့်သင်၌ရှိသံသယရှင်းလင်းဖို့အနည်းငယ်တွန်းအားပေးလိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ထုတ်ဝေတဲ့ဆောင်းပါးတွေမှာအရာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းလင်းပြီးရိုးရှင်းပြီးဖျော်ဖြေမှုတွေအမြဲတမ်းကြိုးစားရှင်းပြတယ်။ ဤအရာသည်ဗဟုသုတကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်နှင့်၎င်း၏ဘူမိဗေဒအကြောင်းပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဘူမိဗေဒ ၎င်းသည်သိပ္ပံပညာသည်မူလအစသာမကကမ္ဘာမြေကြီး၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၊ အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်လုပ်ဆောင်သောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလေ့လာရန်တာဝန်ရှိသည်။။ ၎င်းသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သိပ္ပံပညာဖြစ်ပြီးသင်နေထိုင်သောကမ္ဘာနှင့်မည်သို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုသင်ကောင်းစွာသိရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏မျက်လုံးများဖြင့်မမြင်နိုင်သည့်အရာများ၊ ဥပမာကမ္ဘာမြေတစ်ခုလုံး၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုစသည်တို့ကိုသင်လေ့လာနိုင်သည်။
ဤကဏ္ in ရှိဆောင်းပါးများတစ်လျှောက်လုံးသင့်ကိုအချိန်မရွေးထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် ဘူမိဗေဒအချိန်။ ဤနည်းအားဖြင့်လူသား၏ဘဝအတိုင်းအတာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်လုပ်ဆောင်ရန်အချိန်ယူရမည့်အကြောင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်သည်။
Granada မှာ ဘာကြောင့် ငလျင်တွေ ဒီလောက်များနေရတာလဲ။
por ဂျာမန် Portillo လွန်ခဲ့တဲ့9horas .
Granada သည် ငလျင်များ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငလျင်တွေက အရမ်းမြင့်ပြီး အန္တရာယ်မရှိပေမယ့်...
por ဂျာမန် Portillo လွန်ခဲ့တဲ့6ရက်ပေါင်း .
သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် သမုဒ္ဒရာများ မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းကို လူတို့သည် အံ့သြခဲ့ကြသည်။ XNUMX ရာစုအစတွင် ၊ ယုံကြည်ခဲ့သည် ။ ။
por ဂျာမန် Portillo လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ၎င်းတို့၏မူလအစ၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ မြေအမျိုးအစားစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသော ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ အသွင်သဏ္ဍာန်များရှိသည်။
por ဂျာမန် Portillo လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်သတ္တပတ် .
မီးတောင်များသည် တခါတရံတွင် ပေါက်ကွဲနိုင်သော်လည်း အထင်ကြီးလောက်စရာ ဘူမိဗေဒဖွဲ့စည်းပုံများထဲမှ အချို့...
Metamorphic rocks သည် အတွင်းပိုင်းရှိ အခြားပစ္စည်းများ ပါဝင်မှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ကျောက်များအုပ်စုဖြစ်သည်။
por ဂျာမန် Portillo လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
၎င်း၏ Nahuatl မူလအစကြောင့်၊ ၎င်း၏အမည်သည် "ဆေးလိပ်သောက်တောင်" ဟုအဓိပ္ပာယ်ရပြီး၎င်း၏အမြင့်ကြောင့်၎င်းသည်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၏အမြင့်ဆုံးတောင်ထွတ်ဖြစ်သည်။ ...
Chicxulub မီးတောင်ဝသည် ကျွန်းဆွယ်ရှိ Chicxulub မြို့အနီးတွင် တည်ရှိသော သက်ရောက်မှုရှိသော မီးတောင်ဝတစ်ခုဖြစ်သည်။
ချောက်ကမ်းပါးသည် မတ်စောက်သော လျှောစောက်ပုံစံရှိသော ပထဝီဝင်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီသဘောနဲ့ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်...
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကို လေ့လာသော ပညာရပ်များတွင် ဘူမိဗေဒဖြစ်သည်။ ဘူမိဗေဒဘာသာရပ်ကို လေ့လာပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့သူ...
Periodic Table ပေါ်ရှိ ဒြပ်စင်များကို ကြည့်လိုက်သောအခါ အများစုမှာ ကျန်ရှိနေပြီး ရှားပါးမြေဟု ခေါ်ကြသည်။ တွင်ရှိပါသည်…
Los Gigantes ကမ်းပါးများသည် စပိန်နိုင်ငံ၊ Tenerife၊ Canary ကျွန်းစုများ၏ အနောက်ဘက်တွင်ရှိသော မီးတောင်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်များဖြစ်သည်။ ဆိုဒ်တွင်ပါဝင်သည်...